Uma uqala ngemuva kwesondo lesithuthuthu, kudingeka ucabange ngesidingo sokuthenga imishini ekhethekile, okunciphisa amathuba okulimala uma kwenzeka kwenzeka izingozi zomgwaqo noma ukuwa okuncane.
Ungakhetha kanjani ukuhamba okulungile? Lokhu kuphazamiseka hhayi abaqalayo kuphela, kodwa nabaningi abagibeli abanolwazi. Impendulo kuphela elungile lapha: ukuthenga isethi ephelele yemishini, kodwa ukuhlala kuphela kulezo zinto ezihambisana kahle nomshayeli kanye nemoto.
Uma ucabanga ukuthi ungakhetha kanjani umlilo, okokuqala, kufanele uqaphele ukukhethwa kwesigqoko esinokwethenjelwa. Kufakwa ohlwini lwemishini edingekayo kunoma yisiphi isithandwa somculo esithuthuthu.
Izithuthuthu zamabhayisikili zanamuhla zihlukaniswe zibe izinhlobo eziningana:
Integral - ihlanganisa ikhanda ngokuphelele, inikeze izinga eliphakeme lokuvikelwa kuzo zonke izinhlangothi. Ukubuyekezwa kwenziwa nge-visor evalwe ngilazi evikelayo.
I-Modular - ingokwesigaba sezigqoko ezivaliwe, kodwa, uma iqhathaniswa ne-integral, ikuvumela ukuba uvule hhayi kuphela ukuvulwa kwe-visor, evikelwe ingilazi enqanyelwe umphumela, kodwa futhi ukukhulula yonke ingxenye yangaphambili. Lesi sakhiwo sikuvumela ukuba ususe ukuvikeleka kwezinyane ngenkathi yokupaka, okuvumela ukuba udle noma uphuze ngokukhululekile, ngaphandle kokukhipha isicu.
I-Cross-helmet - umklamo usezici eziningi ezifana nezihlanganisi. Kodwa-ke, le nketho yinto elula kakhulu, eyenza ukunyakaza okulula kakhulu ezindaweni ezimbi. Kukhona ithuba lokuguqula i-cross-helmets ngezibukeli ezikhishwayo noma izakhi ezixubile ukuze zivikele isikhunta. Njengomthetho, esikhundleni se-visor, isethi ihlanganisa izibuko ezikhishwayo.
Isigqoko esivulekile - asinaso isivikelo somzimba. Isetshenziswa ngokuyinhloko lapho egibela izithuthuthu ezisezingeni eliphansi, i-mopeds noma i-scooters. Iningi lamamodeli ayatholakala kakhulu ezindleko, isisindo esincane, ukuhamba nokulula okulula ukusetshenziswa.
Isigqoko - asibheki lutho ngalokhu okuvikelayo. Noma kunjalo, izigqoko zingenele ukuhlangabezana nezidingo ezisemthethweni lapho zigibela isithuthuthu.
Njengamanje, ukukhetha izigqoko ezikhulu kakhulu futhi kuhlukahlukene. Uma ukhetha le nto yezinto zokuhamba ngesithuthuthu, kubalulekile ukuhlala emikhiqizo ehlala eqinile ekhanda, ukuvikela isilwane futhi ungacasuli isikhumba.
Ngabe ngiyiphi imishini yokuhamba ngesithuthuthu okufanele ngiyikhethele umqaphi? Khetha imikhiqizo ephakanyisiwe ehlala ngokuqinile emzimbeni, kodwa ungabangela ukungahambi kahle. Lo mthetho usebenza nesigqoko esifanayo.
Uma ucabanga ukuthi ungakhetha kanjani imishini yezimoto, kuyadingeka ukuthi uqonde ukuthi ingozi ewa nini lapho ugibela isithuthuthu, ikakhulukazi uma isithuthuthu sebhayisikili sokuqala imodeli yezemidlalo. Ukuze uzivikele emonakalweni eyingozi, kwanele ukuthola ukuvikeleka okukhethekile ngesithuthuthu "i-tortle" noma okungenani ijezi elihle lesithuthuthu, elithile ezimweni ezithile ezingadlala ngendima efanayo.
Ngokujwayelekile esigcemeni sabashayeli abanokuhlangenwe nakho kunezinketho eziningana zokuvikela "izivunguvungu". Ngomshini ongenakubekezelelwa ngenkathi ushayela edolobheni, ungakwazi kalula ukunciphisa ukusetshenziswa kwesithuthuthu esingaqondakali kalula, "esimweni sezulu esibucayi noma ekuhambeni okude - gqoka ukuvikelwa okuqinisiwe, ukumboza ngenhla ngejazi elincane.
Uma unquma ukuthi iyiphi imishini yokuhamba ngesithuthuthu, kufanele uqaphele ngokukhethekile ukukhethwa kwengubo epholile, ekhwalithi eyosindisa esangeni elishisayo ekushiseni nasebusweni emakhazeni. Abaningi bamabhayisikili baneziphuphu eziningana ezingasetshenziswa. Ngokuyinhloko, lokho okubizwa okuthiwa ama-perforated models kubonakala ngokuba khona kwezimbobo ezincane ezikhethekile zokususwa kokushisa okuphumelelayo.
Uma ukhetha ijazi, kunethuba lokuba liboshwe ebhulukwe lakhe. Ngokujwayelekile ukusebenza okunjalo kukhona lapho ukhetha imishini yomkhiqizi oyedwa. Kuyinto efiselekayo ukuthi ibhantshi ngesikhathi esifanayo iqukethe ukufaka okuqinile okungavimba emuva uma iwa.
Ekukhethweni kwebhokisi lesithuthuthu, ungasho, ngokuyisisekelo, konke kufana nalokhu mayelana nejackethi. Uma amabhulukwe engacabangi ukuthi kungenzeka ukuxhumeka ngejazi, kulokhu kufanelekile ukuhlala emamodeli afanelekayo, ngaphansi kwayo umoya ongaqhumeki ngesikhathi sokunyakaza.
Uhlobo luni lwezinto zokushisa zokuzikhethela ukuqala? Kunconywa ukuba abashayeli bezimoto baqale ukuhlala ekukhetheni ukuvikelwa kwekhwalithi ngendlela yeglavu ngenani elimangalisayo lezihlangu. Ukutholakala kwemishini enjalo kuyovimbela umonakalo emathanjeni obuthakathaka emiphakathini futhi kugweme ukuhlukana kwemigqa, ngoba uma umuntu ewa , ngokuzenzakalelayo uzama ukuthembela kuye, ukuwayeka, noma ukubamba ngezandla.
Ukuze uqonde ukuthi ungakhetha kanjani igesi elifanele ngendlela yeglovu evikelayo, kwanele ukufanekisela engqondweni yakho ukuthi kungenzeka yini ukulimala ngokuya ngezimo zokushayela nesitayela, futhi nokuhlola ukuthi kulula kangakanani imodeli ekhethiwe ngokufaka amagilavu ezandleni zakho.
Kunconywa ukuba unikeze okuthandayo kumamodeli omgogodla omude angakwazi ukumboza ingxenye yesandla lapho ushayela ngesithuthuthu. Kuyinto efiselekayo ukuthi imikhawulo yemikhono ayiphume ngaphansi kwamagilavu. Ngaphandle kwalokho, ukugibela ibhayisikili akukwazi ukubizwa ngokuthi ukhululekile ngempela ngenxa yomoya ovuthayo njalo.
Ukuzama ukuqonda ukuthi ungakhetha kanjani imishini yezimoto ngendlela efanele, kufanelekile ukucabangela isidingo sokuthenga izithuthuthu ezikhethekile. Uma kuziwa ukugibela imodeli yama-classic ye- motorcycle, akukaze kube kuhle ukuba uchithe imali ekuthengeni izinqola zokugijima. Ngokwemvelo, le ndlela ikwazi ukuhlinzeka ukuvikelwa okuphezulu kokuwa, kepha ukuhamba emidlalweni yokugijima kuyinkimbinkimbi kakhulu.
Ibhulogi yebhayisikili kufanele ivumelane ngokuqinile emlenzeni ongaphansi futhi igwebe kancane umlenze lapho uhamba. Ukuyeka ukukhetha kungcono kumamodeli anezinsimbi ezilula, ukulungiswa okuthembekile kwe-ankle kanye ne-firm, non-slide kuphela. Ngaphambi kokuthenga isithuthuthu, kunconywa ukuthi uchofoze amagiya imizuzu embalwa, uhlezi ngesithuthuthu, okuzokuvumela ukuba uhlole ukuhleleka komkhiqizo.
Amapayipi ka-Elbow namadolo
Abantu abaqonda ukuthi bangakhetha kanjani umlilo, bayangabaza ngesidingo sokuvikelwa ngendlela yemigodi yamadolo kanye namapayipi e-elbow. Ngokuvamile le nto yezinto zokuhamba ngesithuthuthu ithengwa kuphela ngabathandi bokushayela ngokweqile ekuvinjeni okuthakazelisayo.
Kwabaqalayo abangakwazi ukukhetha imishini yezimoto, umuntu kufanele aqaphele amaphethini emadolo kanye namapayipi emigqa yamatshe ahloniphekile nezinga eliphakeme lokuthembeka nokutholakala kwezici ezihambayo ezingeke zivikele kuphela ekulimaweni kanzima kwamalungu kodwa kuzoba lula kakhulu ukusetshenziswa kwansuku zonke.
Amaphuzu abalulekile lapho ukhetha i-moto
Kunemithetho eminingi ejwayelekile ezokuvumela ukuba uqonde ukuthi ungakhetha kanjani ukushisa. Uma ukhetha ukuvikelwa ngesithuthuthu, qaphela lokhu okulandelayo:
Isikhumba semoto ngesithuthuthu ngaso sonke isikhathi singcono kunemikhiqizo eyenziwe ngezindwangu, njengoba sekuye kwenyuka ukumelana nokususwa, kokubili kokuxhumana nesithuthuthu ngenkathi ushayela nalapho kuwela;
Izakhi eziyisisekelo zemishini yokuzivikela kufanele zibe nzima ngokusemandleni emzimbeni, kodwa ungacindezeli, ubangele ukukhathazeka;
Izakhi ezibalulekile kakhulu zokuzivikela ezithuthunyiswa ngumthuthukisi wezimoto, zingcono kuye ngokusho komshwalense wokuthola umonakalo ongakwenzeka;
Imiklamo yemishini ixhomeke ekuthandweni kwakho kwemoto ngayinye, kodwa akufanele uzinikezele ukuthi izinto ezithengiwe zenzeke kanjani ukuze kube khona ukubukeka okukhangayo.
Ukufometha umzila, kungaphawulwa ukuthi akukho imishini eminingi yokuvikela lapho ugibela isithuthuthu. Kudingekile kuphela ukuba uhlukanise nesinye sezici ezingenhla, njengoba kunokukhula okweqile engozini yokulimala.
Ukutholakala kwemishini ekhethiwe kanye nekhwalithi ephezulu ngokuqondile kuxhomeke ezingeni lokuphepha komshayeli. Ngokwemvelo, ukugibela isithuthuthu kudinga ukutholakala kokuqonda, ngoba uma uwela ngesivinini se-crazy, akukho neyodwa, ngisho nokuvikela okunokwethenjelwa, kuzosindisa.